Sikasɛm Ho Ɔbenfoɔ Bi Kyerɛkyerɛ Ne Gyidie Mu | Nsɛm a Wɔbisabisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
NSƐM A WƆBISABISA | STEPHEN TAYLOR
Sikasɛm Ho Ɔbenfoɔ Bi Kyerɛkyerɛ Ne Gyidie Mu
Ɔbenfoɔ Stephen Taylor kyerɛ adeɛ na ɔsan yɛ nhwehwɛmu wɔ Suapɔn bi a ɛwɔ Sydney, Australia. Ɔhwɛ sɛnea adwadie mu sikasɛm teɛ ne sɛnea wɔbɛhwɛ ma ayɛ adwuma yie. Nyan! twerɛfoɔ bisaa no sɛnea n’adwuma no aka ne gyidie.
Ka wo ho asɛm kakra kyerɛ yɛn.
Ná m’awofoɔ yɛ asɔrekɔfoɔ a wɔdi nokorɛ na wɔyɛ adwumaden. Wɔhyɛɛ me nkuran sɛ mensua nwoma yie, enti mesuaa adwadie ho adeɛ wɔ Suapɔn a ɛwɔ New South Wales. Mehunuiɛ sɛ m’ani gye nhwehwɛmu ho, enti meyɛɛ m’adwene sɛ mɛyɛ nhwehwɛmu na masan akyerɛ adeɛ.
Dɛn mu nhwehwɛmu na woyɛe?
Adeɛ a na ɛda me koma so paa ne sɛ mɛhunu sɛnea sika a nkurɔfo de hyɛ adwumakuo ahodoɔ mu no yɛ adwuma fa. Sika ho adwadie ma nkurɔfoɔ tumi de wɔn sika hyɛ nnwuma bi mu na nnwumakuo no de ayɛ adwuma ma mfasoɔ aba so. Nhwehwɛmu a meyɛe no bi ne sɛ mɛhunu nneɛma a ɛma nnwumakuo bi sikasɛm kɔ soro anaa ɛba fam.
Wobɛtumi akyerɛ yɛn sɛnea ɛteɛ?
Wɔhwɛ kwan sɛ nnwumakuo de mfasoɔ a wɔnya bɛto dwa bere nyinaa. Sɛ nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔde wɔn sika hyɛ adwumakuo bi mu a, wɔhwɛ sɛnea adwumakuo no sikasɛm teɛ. Nanso nnwumakuo taa fa akwan foforɔ so de wɔn mfasoɔ to dwa. Ebia ebinom a wɔne nnwumakuo no nyɛ adwene bɛka sɛ kwan a wɔfa so de wɔn sikasɛm to dwa no ma wɔnya kwan katakata nneɛma so. Enti ɛmma nkurɔfoɔ nhu wɔn sikasɛm mu yie. Ɛbɛyɛ dɛn na wɔn a wɔde wɔn sika hyɛ adwumakuo bi mu no ahu sɛnea adwumakuo no sikasɛm teɛ ankasa? Dɛn na ɛhia sɛ wɔn a wɔhwɛ sika ho adwadie so no hu na ama nneɛma akɔ so yie? Seesei me ne me mfɛfoɔ rebɔ mmɔden sɛ yɛbɛnya nsɛm yi ho mmuaeɛ.
Asɔre bɛn na na wokɔ?
Ná me ne m’awofoɔ kɔ Presby Asɔre, nanso bere a menyinii kakra no, megyaee asɔre kɔ. Ná megye di sɛ Ɔbɔadeɛ bi wɔ hɔ, na na megye Bible tom. Nanso na m’adwene yɛ me sɛ, sɛ obi hyia ɔhaw bi wɔ n’asetenam a, nyamesom ntumi mmoa no. Me deɛ na mete nka sɛ asɔre yɛ kuo, wopɛ a na wodɔm. Berɛ a mekɔɔ Europe na mekɔɔ asɔre akɛseakɛseɛ mu kɔhunuu sɛnea wɔwɔ sika pii no, ɛyɛɛ me nwanwa sɛ nnipa pii di hia buruburoo saa. Mante saa asɛm no ase, na ɛma menyaa nyamesom ho adwene a ɛntene.
Dɛn na ɛma wosesaa w’adwene?
Yehowa Adansefoɔ fii aseɛ ne me yere Jennifer suaa Bible, na na ɔkɔ wɔn nhyiamu. Enti, meyɛɛ m’adwene sɛ me ne no bɛkɔ akɔhwɛ nea wɔyɛ wɔ hɔ. Ankyɛ koraa na mehunuiɛ sɛ sɛɛ na mennim Bible ho hwee. Ɛyɛɛ me nwanwa paa! Enti Adansefoɔ no fii aseɛ ne me suaa Bible.
M’ani gyee ɔkwan a Adansefoɔ no fa so sua adeɛ no ho paa. Ná wɔbisabisa nsɛm, wɔde nsɛmpɔ bi si hɔ susu ho, na afei wɔde nkyerɛkyerɛmu a ɛfata ma. Saa kwan yi ara so na na mefa yɛ me nhwehwɛmu! Jennifer bɔɔ asu no ankyɛ na me nso mebɔɔ asu bɛyɛɛ Yehowa Dansefoɔ wɔ afe 1999 mu.
Sikasɛm ho nimdeɛ a wowɔ no, ama woagye Bible adi paa?
Saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ. Sɛ mɛyɛ mfatoho a, Mmara a Onyankopɔn de maa tete Israel no, na wɔtumi de siesie sikasɛm mu haw a ɛde bɛsi nnɛ mpo animdefoɔ ntumi nhunuu ano no. Ná Mmara no hwehwɛ sɛ Israelfo no gya wɔn nnɔbaeɛ no bi ma ahiafoɔ, (ɛte sɛ ɛtoɔ ne nsiakyibaa), wɔbɔ bosea a wɔnnye ho nsiho (ɛma obiara tumi gye bosea), na sɛ obi gye ne nua asase a, ɛsɛ sɛ ɔsan dane ma no mfie 50 biara (ɛbɔ agyapadeɛ ho ban). (Leviticus 19:9, 10; 25:10, 35-37; Deuteronomium 24:19-21) Saa mmara yi ne sikasɛm ho nhyehyɛe foforɔ boaa nkurɔfoɔ wɔ akwan titire mmiɛnsa so: (1) Sɛ wɔn sikasɛm yɛ basaa a, na ɛtwitwa gye wɔn, (2) ɛgyee wɔn firii ohia buruburoo mu, (3) amma nnipa dodoɔ no ara anni hia. Wei nyinaa kɔɔ so bɛboro mfie 3,000 ansa na wɔrefiri sikasɛm ho adesua ne nhwehwɛmu ase!
Bible ma nnipa nya suban pa a ɛboa ma wɔn sikasɛm yɛ yie. Ebi ne sɛ, ɛkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ ma wɔdi nokorɛ, afoforɔ tumi de wɔn ho to wɔn so, na wɔda ayamhyehyeɛ ne ayamyɛ adi. (Deuteronomium 15:7-11; 25:15; Dwom 15) Nea ɛyɛ anika ne sɛ nnansa yi a wiase nyinaa sikasɛm yɛɛ basaa no, adwadie ho sukuu ne nnwumakuo bi afiri aseɛ reka kyerɛ adwadifoɔ ne sikasɛm ho animdefoɔ sɛ, wɔnhyɛ bɔ sɛ wɔbɛdi adwadie mu mmara bi so pɛpɛɛpɛ. Sɛnea mehu no, Bible mu mmara som bo koraa sene adwuma mmara biara.
Sɛn na wo som mu gyidie aka wo?
Manya Bible a masua no so mfasoɔ sene biribi foforɔ biara
Deɛ mɛka ne sɛ, Jennifer se seesei mete asɛm ase paa. Kane no, na mepɛ biribiara frenkyemm. Ebia ɛno nti na na meyɛ adeɛ wɔ sikasɛm ho adesua mu no! Bible mu afotusɛm a mede bɔ me bra no aboa ma menyɛ adeɛ ntra so. Seesei, m’ani gye paa, na m’abusua nso ani gye bebree. Afei nso, yɛka Bible mu asɛm a mfasoɔ wɔ so kyerɛ nkurɔfoɔ. Manya Bible a masua no so mfasoɔ sene biribi foforɔ biara.